Tafatafa Niaraka Tamin’i Riverbend Mikasika Ny Bokiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Oktobra 2017 16:22 GMT
Nanao tafatafa niaraka tamin'i Riverbend, ilay “Vehivavy Mpitoraka Bilaogy avy any Iràka” ny Alternet. Ny Famintinana izany:
Lakshmi Chaudhry: Andao atomboka amin'ny tena izy: nahoana ianao no nanomboka nanoratra bilaogy?
Ny olona voalohany nandrisika ahy hanoratra bilaogy dia i Salam Pax an'ny “Aiza i Raed?.” Taorian'ny ady, nandroso hevitra tamiko izy ny tokony hanombohako ny bilaogiko manokana satria aho afaka manoratra amin'ny teny Anglisy, ary taorian'ny nieritreretako kely momba io, nanao ihany aho. Tiako ilay hevitry ny fanoratana bilaogy satria aho tena nikorontan-tsaina amin'ny media tandrefana amin'ny filazàny ny antsasaky ny tantara any Iràka fotsiny. Toa tsy nisy olona nahalala ny zavatra miseho ao anatin'ilay firenena — ireo fahapotehana sy loza iainan'ireo Irakiana isanandro.
Fanampin'izany, voaporofo ho mitsabo ihany koa ny fanoratana bilaogy. Lasa fomba iray hanariana ireo tahotra sy hatezerana izay tsy afaka tena asehoko manoloana ny fianakaviana sy ireo namana , satria ilaina foana ny mijoro am-pahatanjahana sy, indraindray, misaina ny tsara.
Amin'ny famakiana ireo fampidirana ao amin'ny bilaoginao, mazava be fa tsy irakiana ny ampahany lehibe amin'ireo mpamakinao. Izany mihitsy ve no tena noeritreretinao hatrany am-boalohany sa lasa toy izany fotsiny ilay izy?
Tsy mieritreritra ny hanoratra ny bilaogy ho anà sokajinà mpamaky manokana aho. Te-haneho ireo fihetsehampoko sy ireo eritreritro fotsiny aho, ary tsy fantatro tsara hoe iza no hamaky azy io. Tsy nieritreritra Irakiana maro ao anatin'i Iràka hamaky an'io mihitsy aho, satria ireo Irakiana tena sahirana loatra miatrika ireo zava-misy isanandro ka tsy afaka hamaky na hoe hanoratra bilaogy. Tiako ny mitoraka bilaogy amin'ny teny Anglisy noho izy io fiteny azon'ny olona maro amin'ireo firenena maro samihafa. Mety ho nitory tamin'ireo amboaram-peo any am-piangonana aho raha nitoraka bilaogy tamin'ny teny Arabo.
Inona no tena anjara lalaovin'ny bilaogy amin'ny fiainanao ankehitriny, indrindra raha jerena ny fahombiazana lehibe ananany?
Lasa ampahany amin'ny fiainako isanandro ny bilaogy. Lasa mahita zavatra amin'ny fomba fijery amin'ny fitorahana bilaogy aho amin'ireo toe-javatra maro, ary manontany tena hoe inona no mety hoeritreretin'ireo mpamaky raha toa izy ireo afaka manao na mahita ny zavatra ataoko na hitako ankehitriny ! Indraindray ny fianakaviako te-hahafantatra mikasika io, fa matetika izy ireo matahotra ny amin'ny aiko. Miezaka maka fotoana mamaky sy mamaly ireo imailaka aho, ary indraindray mitoraka bilaogy, fa miankina amin'ny fandehanan'ny herinaratra/finday daholo anefa ireo rehetra ireo.
Isaorana ny Lotsofbigideas tamin'ny rohya.